मूल्य समायोजनपछि ज्योति विकास बैंक, एनएमबि लघुवित्त र सूर्या लाइफको सेयरभाउ कति ? Bizshala -
मूल्य समायोजनपछि ज्योति विकास बैंक, एनएमबि लघुवित्त र सूर्या लाइफको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बोनस सेयरका लागि ३ कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ।
नेप्सेले ज्योति विकास बैंक, एनएमबि लघुवित्त र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता ज्योति विकास बैंकको ४०३.१५ रुपैयाँ, एनएमबि लघुवित्तको १०५३.५० रुपैयाँ र सूर्या लाइफको ६३८.८६ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता ज्योति विकास बैंकको ४४७.५० रुपैयाा, एनएमबि लघुवित्तको १२८० रुपैयाँ र सूर्या लाइफको ७२० रुपैयाँ कायम भएको थियो। अब समायोजित मूल्यअनुसार नै यी कम्पनीको सेयर कारोबारमा आउनेछन्।
लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि यी तीनै कम्पनीले आज पुस ९ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसर्थ हिजो पुस ८ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्रै यी कम्पनीको लाभांश पाउन र सभामा भाग लिन योग्य हुनेछन्।
ज्योति विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कुल १५.५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। जसमा ११ प्रतिशत बोनस र ४.५ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) छन्। प्रस्तावित लाभांश बैंकको यही पुस २३ गते हुने १४ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यसैगरी एनएमबि लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कुल २२.६३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। जसमा २१.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ १.१३ प्रतिशत नगद लाभांश छन्। प्रस्तावित लाभांश संस्थाको यही पुस २६ गते हुने नवौँ वार्षिक साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
त्यस्तै सूर्या लाइफले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि कुल १३.३६८४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। जसमा १२.७ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.६६८४ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनार्थ) छन्। प्रस्तावित लाभांश कम्पनीको यही पुस १९ गते हुने १३ औँ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरुले पाउनेछन्।